सिमेन्टको गुणस्तर सूचकांकमा हेरफेर नभएको विभागको दाबी Bizshala -
एनआईसी एसिया डाइनामिक डेप्ट फन्डमा कति पर्यो खरिद आवेदन ?
सिमेन्टको गुणस्तर सूचकांकमा हेरफेर नभएको विभागको दाबी
काठमाण्डौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको गुणस्तर सूचकांक मा कुनै हेरफेर नभएको बताएको छ ।
विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी केही समयअघि जारी गरेको सिमेन्टको नयाँ मापदण्डमा कुनै हेरफेर नभएको बताएको हो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत सिमेन्टको गुणस्तर आइआरको मान दुई प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा गुणस्तर निर्धारण गर्दा दुई प्रतिशत कायम रहेको थियो ।
हाल संशोधनपश्चात् भारतीय गुणस्तरमा आइआरको मान पाँच प्रतिशत रहेको र नेपाल गुणस्तर ४९.२०७६ मा पनि ३३ ग्रेडको हकमा चार प्रतिशत र ४३ र ५३ ग्रेडको हकमा तीन प्रतिशत अघुलनशील पदार्थको मान कायम गरिएको विभागका महानिर्देक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरको सूचाङ्कमा हेरफेर गरी मिसावट गर्न छुट दिएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको विषयमा कुनै सत्यता नरहेको विभागको भनाइ छ । “ओपिसी सिमेन्टमा क्लिंकर एवं जिप्सन बाहेकका कुनै पनि गैर कच्चा पदार्थ विगतमा पनि प्रयोग गर्ने छुट छैन र हाल पनि छैन”, महानिर्देशक पुडासैनीले भन्नुभयो ।
करिब ९ महिनापछि नेपाल-भारत हवाई उडान सुचारु हुने
वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको गति बढ्न थाल्यो, निक्षेपको अवस्था कस्तो ?
सेयर बजारबाट पैसा कमाउन चाहनेको ओइरो, २२ लाख पुगे लगानीकर्ता
टुबोर्ग ३३० मि.लि. स्लिक क्यानको नयाँ स्वरुप सार्वजनिक
बजारको आकार एकमहिनामै २२.११% ले बढ्यो, मंगलबार फेरि नयाँ कीर्तिमान
निर्यात प्रमुख इन्जिन भएको एफएनसीसीआईका नवनियुक्त अध्यक्ष गोल्छाको भनाई